Ngoku kutshanje, ukuba "ukuhlola" ekuphuculweni kwengane kwisisu somama kwakungaphupha nje. Uninzi lweendlela zokuxilonga zisekelwe kwikhono lomthinteli-gynecologist ngoncedo lwengqondo - ukubona, ukuva nokuthintela-ukufumanisa iinkalo zekhosi yokukhulelwa. Namhlanje, ngenxa yobugcisa bezobugcisa banamhlanje, oogqirha banako, njengokuba bethetha, baqwalasela ukuphuhliswa kweemvumba ngamaso abo. Ngethuba lokuqala kufuneka ufumane i-ultrasound ngexesha lokukhulelwa kwaye kukufanele ukwazi?
Indlela yokuxilongwa kwe-ultrasound inike kakhulu, kokubili kwiingcali kunye nabazali bexesha elizayo. Ngoncedo lwaso, oogqirha baqonda ezininzi iintsholongwane. Ukuxilongwa kwangaphambili kunceda umntwana kwi-utero okanye emva kokuzalwa. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwezi ndlela kwezinye iimeko akudlala indima ebalulekileyo. Iimeko zokusebenzisa i-ultrasound kunoma yiphina iziko lonyango ngamanye amaxesha lixhatshazwa ukufumana isithombe kunye nokuqinisekisa ngesondo lomntwana, ukulibala ukuba ukuxilongwa kwe-ultrasound, njengaluphina unyango olwenziwe ngonyango, lunempembelelo ethile kwiimfucu zezinto eziphilayo. Kuza kubekho namhlanje, akukho miphumo ebalulekileyo yolu khetho lokufundwa. Nangona kunjalo, amava ehlabathi ngokuxilongwa kwe-ultrasound ayikho kakhulu, ngoko ke oogqirha bezobugcisa ezahlukeneyo balandela indlela yokusetyenziswa okulawulwayo ngale ndlela, ingakumbi kwiimbalo.
Ukuba isimo sempilo kamama esizayo silungile kwaye akukho zikhalazo, ugqirha wokuqala wokuqala oza kutyumba kwi-iveki ye-11 ukuya kwe-13 yokukhulelwa. Kulo xesha okwakhiwa ngayo i-placenta, kwaye ubukhulu bomntwana buye bukhangele kakuhle. Uhlolo luqhutyelwa ekupheliseni iimpazamo eziphambili zophuhliso. Ugqirha we-ultrasound diagnostics unokuqinisekisa ubungqina beempawu kunye nemilenze yesisu, qwalasela izakhiwo zengqondo yakhe, intliziyo, umlenze kunye nezinye izitho zangaphakathi. I-ultrasound, ngaphambi kwexesha elicetywayo, lwenziwa kuphela kwizonyango ezizodwa zonyango. Ngeli xesha, unokufumana i-ultrasound phantse nayiphi na indawo yonyango. Nangona kunjalo, musa ukukhawuleza ukuya apho ngaphandle kwinconywa yentsholongwane yomzimba. Ukuze uqinisekise ubungqina bokukhulelwa, sebenzisa uvavanyo!
Isifundo sesibini senziwa ngeveki ye-18-20, xa ukukhulelwa kufikela phakathi. Kutheni kubalulekile ukuba ugqirha ahlole umntwana ngeli xesha? Isiqhamo sikhulu ngokwaneleyo ukwenzela ukuba ugqirha angayihlola ngokucacileyo iinkqubo ezi-5 ezibaluleke kakhulu zesebe: i-cardiovascular, i-nervous, ithambo, i-urrogenital kunye ne-digestive. Yiyiphi inqaku lazo zonke iingcali ezakhayo? Kungakhathaliseki ukuba izitho ezibalulekileyo ziphuhlisiwe ngokufanelekileyo, ingaba kuya kuba nomntu omncinci, ephuma kwisibeleko sikamama ekukhanyeni. Ukuba kukho ukugxekwa kwanoma yiphina i-pathology, ugqirha uya kucetyiswa ukuba aphinda aphinda ukuphinda isifundo kwiiveki ezimbalwa. Ukuze ufumane isondo somntwana ongakazalwa uze ufumane isithombe somemori, phantse bonke abazali bafuna, kodwa musa ukukhawuleza ukwenza i-ultrasound nje ngenxa yaloo nto. Canda umntwana wakho kwimithwalo echithekayo!
Uvavanyo lwesithathu oluhleliweyo kumatshini we-ultrasound lwenziwe ekupheleni kokukhulelwa, kwiveki 32-33. Iingcali ziqwalasela imeko yepentecenta, khangela ukuba umntwana ukhula ngokukhuselekileyo, nokuba i-amniotic fluid iyanele. Ukuqaphela uhlobo lokuhanjiswa okuzayo, kubalulekile ukwazi ukuveliswa komntwana. Ukuba itholakala phantsi - konke kulungile. Ukuba izantsi zamatye okanye imilenze, ngoko umama ozayo uya kunikwa ukuya esibhedlele kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuzalwa okuzayo - ukulungiselela. Emva koko, kunokwenzeka ukuba umntwana uza kuzaliswa ngecandelo le-laarean. Ukwenqaba i-ultrasound yimbi enye. Musa ukwesaba ukwenziwa kwe-ultrasound uze uqaphele ukuba uhlole. Ukuba udidekile ngolu hlobo lwesifundo esilandelayo, khumbula ukuba uhlala unethuba lokubonisana nolunye uchwepheshe.
Ukuba isiphelo siyadumaza
Ngelishwa, ingcali ye-ultrasound diagnostics ayikwazanga kuphela iindaba ezilungileyo. Kuba umama ozayo akukho nsizi enkulu ngaphezu kokuva ukuba umntwana wakhe konke akulungile. Kwezinye iimeko, unokunceda umntwana ongakazalwa. Ukuba kukho ukukrokra kwesifo esibi, lo mfazi uya kuthunyelwa ekuzaleni kwiziko elizodwa apho umntwana osanda kuzalwa unokufumaneka ngokukhawuleza ngoncedo olufanelekileyo. Nangona kunjalo, kukho iimeko xa umntwana efunyaniswa ukuba eneenkcenkceshe ezinzulu ezingahambelaniyo zophuhliso. Emva koko umama uya kufuneka enze isigqibo esinzima kunazo zonke ebomini: ukugcina ukukhulelwa okanye ukumphazamisa. Khumbula ukuba unokwenza isigqibo kuphela. Musa ukuvumela uxinzelelo kuwe! Olunye uphando, njengoluvo lwengcali enye, lincinci ukuba lucinge isigqibo sokukhulelwa. Xa ulahlwa yiziko ezizodwa zokuxilongwa kwe-postinatal. Kha thalela!
Ukukhulelwa, iingcamango ezimbi zichaphazela umntwana
Ngokukulindeleka komntwana, ukukhulelwa, iingcebiso ezininzi zamama omlindayo
Ukuchaneka njani ukuthetha ngokuncoma kumfazi
Yintoni elindele iNtombikazi ngo-2014